Xafladii dabaal-dega ee 18 May magaalada BRISTOL UK.+SAWIRO | Salaan Media
Xafladii dabaal-dega ee 18 May magaalada BRISTOL UK.+SAWIRO
Waxa habeenkii xalay oo ay bishu tahay 21/05/2013 kaqsoomay magaalada BRISTOL UK munaasibad aad iyo aad u balaadha oo ay ilyartu isaqabatay xafladaasi oo kadhacday BRISTOL HOTEL PRINCESS STREET BRISTOL ujeeda munaasibadan oo ahayd dabaal dega 18 may 22 guuradii kasoo wareegtay dib ulasoo noqoshada madax banaanida somaliland ayaa waxa ay kadhacday magaalada BRISTOL UK.
munaasibadan oo ay kasoo qaybgaleen wefti balaadhan oo uu hogaaminaayo madaxweyne kuxigeenka jamhuuriyada somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaacill sayli.. 2. wasiirka maaliyada cabdi casiis maxamed samaale. 3. wasiirka ganacsiga mudane cabdiqaadir khaliif axmed . 4.wasiirka difaaca mudane Axmed xaaji cali cabdi [cadami]. 5. wasiirka ku xigeenka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cali xaamud jibriil.
6. xildhibaan cabdilaahi xuseen cige [Balaaki] 7. gudoomiye ku xigeenka kowaad ee xisbiga kulmiye mudane mujaahid maxamed kaahin. 8. safiirka wareega mudane kaysar cabdilahi maxamed. iyo lataliyaha madaxweynaha ee arimaha haweenka somaliland marwo amaal xaaji miisan. iyo safiirka somaliland ufadhiya uk mudane CALI ADEN CAWALE waxa weftiga somaliland lagu soo dhaweyey maqaam aad iyo aad u saraysa iyada oo aad dareemaysay sida ay ugu faraxsanyihiin inay kala qayb galaan bulshada reer somaliland ee qurba joga dabaal dega 18 may oo ah maalin dalkan iyo dadkiisaba ugua fadhida maalin weyn oo ah mid aan la ilaawikarin.
Ugu horeyn wefitigi uu hogaaminayey madaxweyne kuxigeenka somaliland ayaa waxa ay aad iyoaad ugu mahadnaqeen jaaliyada reer somaliland ee ku nool uk gar ahaan jaaliyada somaliland magaalada bristol sida milgaha iyo qiimaha leh aad noo soo dhawayseen. wanan iidin mahadcilinayaa ayuu yidhi madaxweyne ku xigeen ka waxanu bulshada reer somaliland ee qurbaha ku nool ugu baaqay inay qaranimada somaliland ay meel uga soo wad jeestaan ayna iskuduubnaandan . iyada oo halkasi qudbado qiimo badan laga soo jeediyey oo aanan halkan kusoo wada gudbi karin dadkii halkasi kahadley dhamaantood.
Wasiirka maaliyada somaliland oo halkaasi kahadlay ayaa ku dheeraaday in meel loga soo wada jeesgto qadiyada jamhuuriyada somaliland waxaanu uga waramay jaaliyada somaliland ee magaalad bristol xaalada dalku maraayo isaga oo yidhi maanta dalkeenu waxa uu marayaa meel lagu faani karo horumarka ay dawladu samaysey taasi oo uu yidhi dawladu kaligeed wax ma qaban karto hadaan shacabkuna garabtaagneenayn. sidaa daraadeed waxan iidinkula talinayaa inaad wadankiina kaqaybqadataan horumarkiisa iyo kobcinta dhaqaalihiisa meelna loga soo wada jeesto danta umada.
Mar uu lahadleyey jaaliyada qurba joga somaliland ayaa waxa uu yidhi waxa idiin la gudboon inaad isku duubnantaa oo aad noqotaan kuwo isku duuban oo ah ul iyo deerkeed. waxa isagana halkasi kahadlay gudoomiye ku xigeenka kowaad ee xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaahin isaga oo umahadnaqay dhamaan dadkii munaasibadasi sharafta leh soo abaabulay iyo kuwii kasoo qaybgaleyba.
Marwo amaal xaaji miisan ayaa iyada halkasi kalmad ka tidhi iyada oo haweenka qurba jooga ah lahadlaysa ayaa waxa ay tidhi haweenku wa lafdhabarta qoyska kasta sidaa darteed waa inay haweenka ku nool qurbaha ay kaqaybqataan horumarka iyo maalgashiga wadankooda intaba. munaasibadan oo ahayd meed aad iyoa ad loos soo agaasimay iyada oo si toos ah live ah loga daawaneyey TVGA QARANKA somaliland. ayaa dhamaan dadkii soo qayb galayey waxay ahaayeen kuwo aad iyo aad ugu faraxsan inay lakulmaan madaxdkii wadankooda oo bal ay isxaal wareystaan. ,
Abdi Baruud [Cabdi Xarago] Bristol UK..